समाचार बुधबार, फागुन ७, २०७६
विशेषज्ञ चिकित्सकको अन्तर्राष्ट्रिय भेला बारे जानकारी दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा डा. कार्की (दायाँ) । तस्वीरः कमल रिमाल
विश्वका प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टरहरूको नेपालमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय भेला हुने भएको छ । आगामी ९ र १० फागुनमा विराटनगरमा हुने भेलामा दुर्लभ किसिमका शल्यक्रिया पनि गरिने भएको छ ।
साउथ एशियन फेडरेशन अफ युरोगाइनोकोलोजीका प्रतिनिधि एवं विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी विश्वका विभिन्न देशका २ सय विशेषज्ञ चिकित्सक भेला हुने बताए । विशेषज्ञ चिकित्सकले १२ देखि २० जना महिलाको शल्यक्रिया गर्ने भएका छन् ।
विराट मेडिकल कलेजका ६ वटा अप्रेशन थिएटरमा दुर्लभ किसिमका शल्यक्रिया गरिने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण भेलामा सहभागीमाझ गरिने छ । “यौनाङ्ग नै नभएका दुई युवतीको अप्रेशनबाट अंग बनाइने छ”, डा. कार्कीले भने, “पिसाब चुहिने, मूत्रनली फुटेका महिलाहरूको अप्रेशन गरिनेछ ।”
बाहिरबाट आएका विशेषज्ञले गरेको शल्यक्रिया हलको पर्दामा प्रत्यक्ष हेर्दै छलफल गर्न पाइने भएकाले नेपालका चिकित्सकलाई पनि लाभ पुग्ने उनी बताउँछन् ।
यस किसिमको भेला गत वर्ष भारतमा भएको थियो भने दोस्रो भेला नेपालमा हुन लागेको हो । आगामी वर्ष तेस्रो भेला बाङ्लादेशमा र चौथो पाकिस्तानमा गर्ने तय भएको छ ।
भारतमा भएको भेलामा ४० जनाको शल्यक्रिया गरिएकोमा आफू एक्लैले ५ जनाको शल्यक्रिया गरेको डा कार्कीले बताए ।
“यो भेलाले सिक्ने र सिकाउने मौका पाइन्छ, यसबाट नेपालको चिकित्सा क्षेत्रलाई ठूलो लाभ पुग्ने छ”, कार्कीले भने । उनले भेलाले नेपालको स्वास्थ्य पर्यटनलाई पनि सहयोग पुग्ने बताए ।
कोरोना भाइरसका कारण चीनका चिकित्सक भने नआउने भएका छन् । चीनको छिमेकी देश नेपाल भएकाले सय जना जति विशेषज्ञले नाम दर्ता गराएर पनि नआउने जानकारी दिएको कार्की बताउँछन् । अमेरिका, बेलायत, यूरोप, भारत, बाङ्लादेश, पाकिस्तान लगायत देशका विशेषज्ञले भने भेलामा सहभागी हुन नाम दर्ता गराई सकेका छन् ।